पक्राउ परेका जाजरकोटका वडाध्यक्षले के दिए यस्तो वयान ? (भिडियो हेर्नुस्) – Classic Khabar
पक्राउ परेका जाजरकोटका वडाध्यक्षले के दिए यस्तो वयान ? (भिडियो हेर्नुस्)
August 6, 2021 134
जाजरकोटका वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली पक्राउ परेका छन् । उनले एक स्थानिय युवकलाई दाम्लाले बाँ’धेर कु ट’पिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भए पछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरेको हो । जाजरकोटको जुनिचाँदे गापा २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली पक्राउ परेका छन् ।
साउन १५ गते स्थानीय सर्पे दमाइलाई डोरीले बाँ’धेर कु’ट पिट गरेका उनलाई बिहीबार जाजरकोट प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पञ्चालाको टोलीले उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनलाई सदरमुकाम खलंगा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी निरीक्षक खुमानन्द पाण्डेले जानकारी दिए।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि वडाध्यक्षको निकै आलोचना भएको थियो । तर वडाध्यक्षले कसैले ति युवकर्ला मा प से गरेर वडा कार्यालयमा पठाएको बताएका छन् । उनले युवक आफ्नो भतिजो नाता पर्ने पनि बताएका छन् । फरकधार अनलाईनले उनीसंग गरेको कुराकानीको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा उनले भिडियो एडिट गरेर सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन् ।
Prevपंकजको आमाबुबा मिडियामा, प्रिन्जूको रहस्य खोल्दै भने ३ छोराछोरीको आमालाई म’र्न तयार छौं बुहारी स्विकार्दैनौं (भिडियो हेर्नुस्)
Next‘पंकजले मसंग ३ पटक सिन्दुर पोते गरेको हो’ भन्दै प्रिन्जु पुगीन् पंकजकै घर (भिडियो हेर्नुस्)
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै रेखा थापाले भनिन्– शीर्षनेताहरू मभन्दा खत्रा कलाकार हुन्
धुर्मुस सुन्तलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता